Sidee Suuqgeeyayaasha Iimaylku U Isticmaalaan Falanqaynta Saadaasha Si Ay U Horumariyaan Natiijooyinkooda Ecommerce | Martech Zone
Sida Suuqgeeyayaasha iimaylka ay u Isticmaalaan Falanqaynta Saadaasha si ay u horumariyaan Natiijooyinkooda Ecommerce
Jimco, Febraayo 25, 2022 Jimco, Febraayo 25, 2022 Prasanna Chitanand
Soo bixitaanka falanqaynta saadaalinta suuqgeynta iimaylka ayaa caan noqday, gaar ahaan warshadaha ecommerce. Ka faa'iidaysiga tignoolajiyada suuq-geynta saadaalinta ah waxay awood u leedahay inay horumariso beegsiga, waqtiga, iyo ugu dambaynta beddelka ganacsi dheeraad ah iimaylka. Farsamadan ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa aqoonsiga badeecadaha ay suurtogal tahay inay macaamiishaadu iibsadaan, marka ay u badan tahay inay wax iibsadaan, iyo macluumaadka shakhsi ahaaneed ee dhaqaajin doona hawsha.
Saadaalin marketing waa xeelad ka faa'iidaysata xogta habdhaqan ee hore si loo saadaaliyo habdhaqanka mustaqbalka. Xogta, falanqaynta, iyo farsamooyinka cabbiraadda saadaalinta ayaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo ficillada suuq-geyneed ee ay u badan tahay inay beddelaan iyadoo lagu saleynayo astaanta macaamiisha iyo dabeecadaha. Xogtaasi waxay door muhiim ah ka ciyaartaa samaynta go'aannada caqliga leh. Marka lagu dabaqo suuq-geynta iimaylka, algorithms waxay kaa caawin karaan inaad beegsato dhagaystayaasha ku habboon, xoojiso ka-qaybgalka, dhaliso beddelaad badan, oo dakhli badan ka dhaliso ololayaasha iimaylka.
Waa maxay Falanqaynta Saadaashu?
Saadaalin Analytics waa habka xogta ku jihaysan ee ay adeegsadaan suuqgeynayaashu si ay u fahmaan isdhexgalka macaamiisha ololihii hore iyo dhaqdhaqaaqa goobta kaas oo saadaalin kara dabeecadda mustaqbalka. Falanqaynta saadaalinta ayaa waxtar u leh abuurista ololeyaal suuq-geyneed oo gaar ah oo la xidhiidha. Waayo email marketing xirfadlayaasha, dhibcaha xogta saadaaliya waxay bixiyaan aragtiyo iyo fursadaha habdhaqanka macaamiisha sida:
Suurtagalnimada in la jabiyo ama laga baxo
Suurtagalnimada in la iibsado
Waqtiga ugu fiican ee wax iibsiga
Alaabooyinka khuseeya ama qaybaha alaabta
Guud ahaan qiimaha nolosha macmiilka (CLV)
Xogtan ayaa kaa caawin karta inaad fuliso xeelado, tijaabiso xaaladaha, ama xitaa inaad si toos ah u dirto fariinta ku haboon wakhtiga ugu fiican. Halkan waxaa ah saadaalo faa'iido u yeelan kara si kor loogu qaado fariinta, iyo cabbirka guud ahaan waxqabadka iimaylka.
Ujeedada iibsashada - Fahamka sida ay suurtogal u tahay in booqde wax gato waxay kaa caawin kartaa inaad horay u socoto oo aad gudbiso nuxurka saxda ah ee fariintaada. Soo-booqdayaasha xiisaha u qabo waxay u badan tahay inay beddelaan, iyo ilaalinta qiimo dhimistaada xiriirada noocaas ah waxay kor u qaadi doontaa LTV.
Taariikhda la saadaaliyay ee iibka soo socda ESP-yada dhexe iyo kuwa ka casrisanba waxay awood u leeyihiin in ay isu geeyaan caadooyinka wax iibsiga ee xidhiidhka oo ay odorosaan goorta ay samayn karaan dalabkooda soo socda, taas oo awood kuu siinaysa in aad si toos ah u keento iimaylka alaabta lagu taliyay wakhtiga saxda ah.
Qaybta badeecada ama badeecada aad jeceshahay - Aqoonsiga qaybta badeecada ama badeecada uu doorbido isticmaale kastaa wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fiican ugu soo saarto iimaylkaaga badeecada ay door bidaan.
Qiimaha nolosha macmiilka ee la filayo (CLemV) - Marka la eego qiimaha taariikhiga ah ee macaamilka, inta jeer ee wax iibsiga, iyo taariikhda la filayo ee dib u soo iibsiga, qiimaha nolosha ee la saadaaliyay ayaa la soo saari karaa. Falanqayntan waxay kaa caawinaysaa inaad fahanto cidda macaamiishaada ka mid ah ee ugu daacadsan ama ay u badan tahay inay u beddelaan qaab celcelis sare leh (AOV).
Hirgelinta falanqaynta saadaalinta ee ololaha suuq-geynta iimaylka ayaa ka dhigi doona ololahaaga mid shakhsi ah, ku habboon, iyo waqti ku habboon - hagaajinta dakhligaaga.
Sidee Falanqaynta Saadaasha u helaysaa firfircoonida?
Labada suuq ee falanqaynta qorista iyo saadaashaba waxay istaageen USD 10.01 milyan sanadka 2020 waxaana la saadaalinayaa inay taabato $35.45 bilyan marka la gaaro 2027, oo ay ku koraan heerka kobaca sanadlaha ah ee isku dhafan (CAGR21.9% inta u dhaxaysa 2020 ilaa 2027.
Tirakoobka Suuqa Falanqaynta Saadaasha: 2027
Waxa jira dhawr arrimood oo kicinaya caannimada falanqaynta saadaalinta.
Tiknoolajiyada kaydinta ayaa ah kuwo aan qaali ahayn oo la miisaami karo, taas oo awood u siinaysa in la qabto oo si degdeg ah loo falanqeeyo terabyteyada xogta.
Xawaaraha ka shaqaynta iyo qoondaynta xusuusta ee seerfarrada iyo serferrada dalwaddiinta ah (oo dhan server-yada) waxay siisaa fursado lagaga faa'iidaysto qalabka si loo socodsiiyo xaalado aan xad lahayn si loo saadaaliyo xogta.
Platform-yadu waxay isku daraan qalabkan heer la taaban karo waxayna ka dhigayaan tignoolajiyada mid fudud oo la awoodi karo ganacsiga caadiga ah.
Dhammaan kuwan kor ku xusan waxay bixinayaan kor u kaca natiijooyinka ololaha suuq-geynta, taasoo keentay soo laabasho degdeg ah oo ku saabsan maalgashiga tignoolajiyada (ROTI).
Isticmaalka Falanqaynta Saadaasha ee suuq-geynta iimaylka
Marka ay timaado suuq-geynta iimaylka, falanqaynta saadaalinta waxay taageertaa bixiyaha adeegga iimaylka ururka oo waxay ku daraa aqoonsiga waqtiga-dhabta ah ee habdhaqanka xogta macaamiishii hore si loo abuuro ololayaasha iimaylka ee tooska ah iyo kuwa la shaqsiyeeyay. Faa'iidada dheeraadka ah ayaa ah in ay waxtar u leedahay ka soo iibsashada iyo dhisidda xiriirka ilaa xajinta macaamiisha iyo ololaha iimaylka dib-u-noqoshada.
Halkan waxaa ah 4 siyaabood oo falanqaynta saadaalinta ay u wanaajiso xeeladaha ololaha emailkaaga:
Helitaanka macaamiil cusub - Dhammaan qaybaha kale, fursada lagu tilmaamo oo lagu garto daawadayaasha la mid ah waa habka ugu habboon ee suuqgeyn loogu talagalay macaamiisha mustaqbalka. Inta badan makiinadaha xayaysiisyada ayaa awood u leh inay soo dajiyaan ciwaannada iimaylka si ay u muujiyaan isticmaalayaashaada qaab ahaan, juquraafi ahaan, iyo xitaa ku salaysan danahooda. Kadib, astaantaas (ama profiles) waxaa loo isticmaali karaa in lagu xayeysiiyo macaamiisha mustaqbalka leh iyadoo la soo jeedinayo in la saxiixo suuqgeynta iimaylka.
Kordhinta beddelka - Marka macaamiisha suurtagalka ah ay noqdaan macaamiisha ugu horreeya ee ka hela iimaylka xayeysiinta ee shirkad, waxay caadi ahaan heli karaan taxane soo dhaweyn ah sanduuqkooda. Ujeeddadeedu waa in lagu dhiirigeliyo inay iibsadaan alaab. Sidoo kale, dhammaan rajada cusub waxay helayaan iimaylo noocaas ah, iyo mararka qaarkood soo jeedin xayaysiin tayo leh. Adiga oo fulinaya falanqaynta saadaalinta ee xogta dadwaynaha, iyo habdhaqanka labadaba, waxaad kala qaybin kartaa macaamiisha mustaqbalka - tijaabinta fariimo badan, iyo soojeedin - si aad u abuurto iimaylo wargelin ah, ku habboon, iyo shakhsi ahaan loo hagaajiyo, oo dakhli soo saaro.
Dhisidda xidhiidhada xajinta macmiilka - Falanqaynta saadaalinta waxay isticmaali kartaa xulashooyinka talooyinka alaabta ee ka-qaybgalka macaamiisha, iyo sii-haynta. Xogtan ayaa kaa caawin karta inaad beegsato macaamiisha saxda ah ee horay u soo iibsatay alaabtaada ama ka baadhisay mareegahaaga. Ku darida tafaasiisha kala duwan sida da'da, jinsiga, qadarka dalbashada, goobta, iwm. Waa suurtogal in la aqoonsado nooca alaabta ay jeclaan lahaayeen inay iibsadaan mustaqbalka. Xogtan, waxaad u soo dirtaa fariimo iimaylo ah iyo waxay u soo bandhigtaa rajada gaarka ah. Falanqaynta saadaalinta ayaa sidoo kale faa'iido u leh go'aaminta sida joogtada ah ee macaamiishu wax u iibsadaan, waxaad fahmi kartaa inta jeer ee ugu wanaagsan si aad ugu soo dirto iimaylada la xiriira alaabtaada.
Istaraatiijiyada guul-celinta macmiilka - Diritaanka a waan kuu xiisnay fariinta iimaylka ah ee dhammaan macaamiisha ka dib wakhti gaar ah tan iyo markii ugu dambeysay ee ay iibsadaan alaab. Iyada oo la kaashanayo falanqaynta saadaalinta, waxaad abuuri kartaa iimaylo guul-celin shaqsiyeed, oo aad ogaato inta u dhaxaysa wakhtiga ugu fiican ee aad fariimaha ugu diri karto, oo waxaad siisaa qiimo dhimis ama dhiirigelin si aad dib ugu habayn karto.
Suuqgeynta saadaalinta waa hub xooggan oo loogu talagalay suuqgeynayaasha si ay u fahmaan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah oo ay ka caawiyaan inay adeegsadaan istiraatiijiyad awood leh ololayaasha suuqgeynta iimaylka. Tani, waxaad ku qancin kartaa macaamiishaada, oo aad u rogi kartaa macaamiisha daacadda ah, taas oo ugu dambeyntii keenta kor u kaca iibka.
Tags: ujeedo iibsidillaacheerka beddelkaqiimaha nolosha macaamiishaguusha macmiilkaecommerceemailEmail Marketingdaawadayaasha u egka kooban shakhsifalanqaynta saadaalintasaadaasha email marketingsuuq geynta saadaalintatalooyinka alaabtataariikhda iibsigahelitaanka macaamiishahelitaanka macaamiishasubscriber gareeya
Sidee UTM Parameters ee iimaylka ugu Shaqeeya Ololaha Falanqaynta Google?
Hagaha Si Fudud Loogu Helo Dib-u-Xiriirinta Dhabta Ah Iyo Darajooyinka Google-ka Isticmaalka AI